Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 28:1-27
Ehaz malitere ịchị Juda (1-4)
Ndị Siria na ndị Izrel meriri ndị Juda n’agha (5-8)
Oded dụrụ ndị Izrel ọdụ (9-15)
E wedara ndị Juda ala (16-19)
Mgbe Ehaz malitere ife arụsị na mgbe ọ nwụrụ (20-27)
28 Ehaz+ dị afọ iri abụọ mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ iri na isii na Jeruselem. Devid nna nna ya mere ihe dị mma n’anya Jehova, ma o meghị ka Devid.+ 2 Kama, ọ kpara àgwà ka ndị eze Izrel.+ Ọ kpụdịrị arụsị+ ndị e ji efe Bel. 3 O sukwara àjà ọkụ na Ndagwurugwu Nwa Hinọm,* kpọọkwa ụmụ ya ndị nwoke ọkụ iji chụọ àjà.+ Ihe a o mere bụ arụ mba ndị+ Jehova chụpụrụ n’ihi ndị Izrel nọ na-akpa. 4 Ọ nọkwa na-achụ àjà, na-esukwa àjà ọkụ n’ebe ndị dị elu,+ n’ugwu dị iche iche, nakwa n’okpuru nnukwu osisi ọ bụla na-ama pokopoko.+ 5 Jehova Chineke ya wee nyefee ya n’aka eze Siria,+ ya emerie ya, dọrọkwa ọtụtụ n’ime ndị ya n’agha laa Damaskọs.+ Chineke nyefekwara ya n’aka eze Izrel, ya asụọ ya na ndị obodo ya akwụ. 6 N’otu ụbọchị, Pika+ nwa Remalaya batara na Juda gbuo otu narị puku mmadụ na puku iri abụọ (120,000). Ha niile bụkwa ndị dike. O gburu ha n’ihi na ha hapụrụ Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha.+ 7 Zikraị, onye Ifrem bụ́ dike, gbukwara Measaya nwa eze na Azraịkam bụ́ onye na-ahụ maka obí* eze nakwa Elkena bụ́ onye na-esote eze. 8 Ndị Izrel dọkwaara narị puku ndị Juda abụọ (200,000) bụ́ ụmụnne ha n’agha, ma ụmụ nwaanyị, ma ụmụ ha ndị nwoke, ma ụmụ ha ndị nwaanyị. Ha bukọkwaara ọtụtụ ngwongwo ha laa Sameria.+ 9 Ma, onye amụma Jehova aha ya bụ Oded nọ ebe ahụ. Ọ gakwuuru ndị ahụ si agha na-alọta Sameria, sị ha: “Ọ bụ n’ihi iwe Jehova bụ́ Chineke nna nna unu hà na-ewesa Juda mere o ji nyefee ha n’aka unu.+ Ma unu ji obi ọjọọ gbuo ha, nke mere na Chineke matara ihe unu mere. 10 Ugbu a, unu na-achọ iji ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị Juda na ndị Jeruselem mere ndị ohu.+ Ọ̀ bụ na ununwa anaghị emehie Jehova bụ́ Chineke unu? 11 Ugbu a, geenụ m ntị. Kpọghachinụ ndị ahụ unu gara na nke ụmụnne unu dọrọ n’agha, n’ihi na Jehova na-ewere unu ezigbo iwe.” 12 N’ihi ihe a o kwuru, ụfọdụ ndị isi n’ebo Ifrem gakwuuru ndị ahụ si agha na-alọta. Ndị isi ahụ bụ Azaraya nwa Jehohenan, Berekaya nwa Meshilemọt, Jehizkaya nwa Shalọm, na Amesa nwa Hadlaị. 13 Ha gara sị ha: “Unu akpọbatakwala ndị a unu dọtara n’agha ebe a, n’ihi na ọ ga-eme ka Jehova maa anyị ikpe. Ihe a unu na-achọ ime ga-emekwa ka mmehie anyị hikwuo nne, n’ihi na nke anyị merela eme karịrị akarị. Chineke na-ewekwara Izrel ezigbo iwe.” 14 Ndị agha ahụ wee kpọrọ ndị ahụ ha dọtara n’agha kpọnye ndị isi ahụ na ndị niile gbakọrọ ebe ahụ, hapụkwara ha ihe ha kwatara n’agha.+ 15 Ụfọdụ ndị a họpụtara gaziri kpọrọ ndị ahụ a dọtara n’agha, sikwa n’ihe ndị ahụ a kwatara n’agha chịnye ndị gba ọtọ n’ime ha uwe. Otú a ka ha si chịnye ha uwe, ha eyiri. Ha chịnyekwara ha akpụkpọ ụkwụ, nye ha nri, mmiri, nakwa mmanụ ha ga-ete. Ha jikwa jakị buru ndị nke ike gwụrụ buga ebe ụmụnne ha nọ na Jeriko, bụ́ obodo nkwụ. Mgbe ha bugachara ha, ha laghachiri Sameria. 16 N’oge ahụ, Eze Ehaz rịọrọ ndị eze Asiria ka ha nyere ya aka.+ 17 Ndị Ịdọm bịakwara ọzọ lụso ndị Juda agha, merie ha ma dọrọ ndị mmadụ n’agha. 18 Ndị Filistia+ lụsokwara obodo ndị dị na Shefila*+ na Negeb,* bụ́ ndị dị na Juda, agha ma weghara Bet-shimesh,+ Aịjalọn,+ Gedirọt, Soko na ime obodo ndị dị ya nso,* Timna+ na ime obodo ndị dị ya nso, nakwa Gimzo na ime obodo ndị dị ya nso. Ha gakwara biri ebe ahụ. 19 Jehova wedara Juda ala n’ihi Ehaz eze Izrel, maka na ọ hapụrụ ndị mmadụ ka ha na-eme otú masịrị ha na Juda. Ọ bụ ya mere ha ji mee ọtụtụ mmehie, kwụsị ife Jehova. 20 Tilgat-pilniza+ eze Asiria mechakwara bịa lụso Ehaz agha, taakwa ya ahụhụ+ kama inyere ya aka. 21 O nwere oge Ehaz kwakọọrọ ihe niile dị n’ụlọ Jehova na n’ụlọ* eze+ nakwa n’ụlọ ndị isi, jiri ha nye eze Asiria onyinye. Ma ihe a o mere enyereghị ya aka. 22 Mgbe Eze Ehaz nọ na-ata ahụhụ, o mehiere Jehova karịa otú ọ dị mbụ na-eme. 23 Ndị Damaskọs meriri ya,+ ya amalite ịchụrụ chi ha dị iche iche àjà.+ O kwukwara, sị: “Ebe ọ bụ na chi ndị eze Siria na-enyere ha aka, m ga-achụrụ chi ndị a àjà ka ha nyere m aka.”+ Ma ha kpataara ya na Izrel niile ọdachi. 24 Ehaz chịkọtakwara arịa ndị dị n’ụlọ ezi Chineke, gbukasịakwa arịa ndị ahụ dị n’ụlọ ezi Chineke.+ O mechiri ọnụ ụzọ ụlọ Jehova,+ rụọkwara onwe ya ebe ịchụàjà n’akụkụ okporo ụzọ ọ bụla na Jeruselem. 25 Ọ gakwara n’obodo niile dị na Juda rụọ ebe ndị dị elu a ga-anọ na-esuru chi ọzọ dị iche iche àjà ọkụ.+ Otú a ka o si kpasuo Jehova bụ́ Chineke nna nna ya hà iwe. 26 E dere akụkọ ndị ọzọ gbasara ya, malite ná mbido ruo ná ngwụcha, n’akwụkwọ e dere gbasara ndị eze Juda na Izrel.+ 27 Ehaz mechara nwụọ otú nna nna ya hà nwụrụ. Ha liri ya n’obodo Devid dị na Jeruselem. Ma ha ebubataghị ya ebe a na-eli ndị eze Izrel.+ Hezekaya nwa ya nọchiri ya, malite ịchị.